February 2016 – International War News Journal
အမေရိကန်စစ်တပ်ထုတ် ၆၃ တန်ချိန်ရှိ M1A1 Abram တင့်ကား Drift မောင်းနှင်ပြသ
Posted on February 19, 2016 February 19, 2016 by MMAGTECH
ယခု ဗီဒီယိုတွင် တင့်ကား မောင်းနှင်ခြင်းကို အတက်ပညာရပ်တစ်ခု အဖြစ်သာမက ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်မြင့်ကြသည့် US Marines စစ်သားများမှ အမေရိကန်စစ်တပ်ထုတ် ၆၃ တန်ချိန်ရှိ M1A1 Abram တင့်ကားကို နှင်းတောထဲတွင် Drift မောင်းနှင်ပြသခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Reporting by #WHISKEY (Editor)
Exclusively (Myanmar-Language) on International War News Journal.
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူထားသော်လည်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များ
Posted on February 18, 2016 by MMAGTECH
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူထားသော်လည်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် စစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ပြည်သူများမှာ စစ်မီးအန္တရာယ်များ ကူစက်လောင်ကျွမ်းခံနေရပြီး အိုးအိမ်များကို စွန့် ခွာ၍ ထွက်ပြေတိမ်းရှောင်နေကြရသည်။
ထိုအကြောင်းအရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အလ်ဂျာဇီးရား သတင်းဌာနမှ ယခုလို သွားရောက်မေးမြန်း ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားသည်။
နိုင်ငံတကာစစ်သတင်းဂျာနယ်မှ ရုပ်သံဗီဒီယို ကြည့်ရှုရန် –
Reporting by #AJAX (Editor in chief)
Exclusively on – နိုင်ငံတကာစစ်သတင်းဂျာနယ် International War News Journal.
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှ အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများ (ရုပ်သံ)
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဒမက်စကတ်မြို့ တော် မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိသော မဒေးရားမြို.အား ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီအတွင်း လက်နက်ကြီးများဖြင့် အပြင်းအထန် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခြင်း များနှင့် ဆောင်းရာသီအတွင်း ပိုမိုတင်းကျပ်သောတားဆီးပိတ်ဆို.မှုများ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အလွန်အမင်း အဟာရချို.တဲ့မှုများကို ကုသရန် လုံလောက်သည့် အဟာရအစားအစာများ အပါအဝင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုများဖြစ်သော လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးခြင်းများ ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။
လူဦးရေ ၂၀,၀၀၀ ရှိသောမြို့ တွင် ခန်.မှန်းခြေအဟာရချို့ တဲ့လူနာပေါင်း ၃၂၀ ခန့် ရှိနေပြီး ၄င်းတို.အထဲမှ ၃၃ ဦးမှာ အခြေအနေဆိုးရွားနေပါသည်။ ထိုလူနာများသည် ထိရောက်သည့် ကုသမှုများအား အလျင်အမြန်ရရှိမှု မရှိခဲ့လျင် သေဆုံးသွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုအကြောင်းအရာ အပြည်အစုံကို အောက်ပါဗီဒီယိုတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည် –
Reference & video: #VICE #MSF
Reporting by #AJAX @ International War News Journal
This video originally appeared on –